विमान खसाल्न विषाक्त ग्याँस या बम प्रयोग गर्ने तयारी थियो– अष्ट्रेलियाली मिडिया | Kendrabindu Nepal Online News
विमान खसाल्न विषाक्त ग्याँस या बम प्रयोग गर्ने तयारी थियो– अष्ट्रेलियाली मिडिया
१६ श्रावण २०७४, सोमबार १४:४२
सिड्नी, १६ साउन । अष्ट्रेलियाको एक विमानलाई उडिसकेपछि खसाल्नेगरी बनाइएको भनिएको आतङ्कवादी योजनाका दोषीले उक्त विमानलाई विषाक्त ग्याँस वा बम पड्काएर खसाल्ने योजना बनाएको बताएका छन् ।
उक्त बम अपहरणगरी खसाल्ने योजना बनाएका उनीहरुसँगको बयानमा प्रहरीले उक्त तथ्य पत्ता लागेको जनाएको छ । त्यसमा संलग्न भएको आशङ्कामा सिड्नी क्षेत्रबाट कैयौँलाई पक्राउ गरेको छ ।
आइतबार बिहान प्रहरीले चार जनालाई गिरफ्तार गरेको जनाएको थियो । उनीहरुले यसरी विमान खसाल्ने योजना बनाएको तथ्य खुलेको प्रहरीलाई उद्धृतगर्दै अष्ट्रेलियाली पत्रिकाले सोमबार जनाएका छन् ।
यस विषयमा अनुुसन्धान सुरु गरिएको र अनुसन्धानकर्ताले उक्त हमलाको तयारीमा विस्फोटक सामग्रीको प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थाहा भएको बताएका थिए ।
पक्राउ परेकामध्येका दुइजना लेबनानी मूलका अष्ट्रेलियन नागरिक हुन् । उनीहरुका बुबा अष्ट्रेलियाली र आमा लेबनानी रहेका छन् । पक्राउ परेका मध्येका दुई जनाले सो खुलासा गरेका छन् ।
उक्त आतङ्कवादी हमलाको योजना प्रहरीले आइतबार बिहानै असफल बनाएको जनाएपछि अष्ट्रेलियाका सबै विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइएको छ ।
अष्ट्रेलियाको प्रहरीले विस्फोटक सामाग्रीको प्रयोग गरी विमानलाई खसाल्न लागिएको सूचनाका आधारमा गरिएको खोजीमा उक्त खतरनाक योजनाको पर्दाफास भएको जनाएको थियो । सोमबार पनि यहाँको सरक्षा व्यवस्था निकै नै कडा पारिएको जनाएको छ ।
अष्ट्रेलियाली सरकारले आतङ्कवाद विरोधी कारबाही अन्तर्गत सो योजना विफल बनाउन प्रहरी सफल भएको भन्दै अब विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा बनाइने हिजो नै बताएको थियो ।
भारी हातहतियारले सुसज्जित प्रहरी र अष्ट्रेलियाको घरेलु गुप्तचर निकायका सदस्यहरुले सिड्नीका विभिन्न ठाउँमा छापा मारेर कैयौं व्यक्ति पक्राउ गरेका छन् । पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान भने खुलाइएको छैन ।
अष्ट्रेलियाको राजधानी सिड्नीबाट प्राप्त समाचारहरुमा सिड्नी सहर र यहाँका विमानस्थलमा थप सुरक्षाकर्मी बढाइएको छ । सरकारले यात्रुहरुलाई धैर्य धारण गर्न र हतास नभई यात्रा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रासस/एएफपी
aeroplane, austrelia, foiled, target, terrorist
Prevअपहरित बालक चौधरीको चार दिनपछि उद्धार
प्राधिकरणको नयाँ महसुल दर : घरायसी ग्राहकलाई फाइदा, मध्यम वर्गले बढी तिर्नुपर्नेNext
कर्मचारीले आफ्नो तलब आफैंले बढाउन पाउने कम्पनी !
कहाँ सुत्छन् हवाईजहाजमा एयरहोस्टेज ?
अस्ट्रेलियामा मृत्युको मुख्य कारण मुटु रोग
टेस्टमा पहिलोपटक अस्ट्रेलियालाई हराउँदै बंगलादेशले रच्यो इतिहास